Barnaamijka Afuri Walaal: 2,600 qoysas ku nool 5 degmo oo la gaarsiiyay deeq raashin ah - Jowhar Somali Leader
Home Somali Barnaamijka Afuri Walaal: 2,600 qoysas ku nool 5 degmo oo la gaarsiiyay...
Barnaamijka Afuri Walaal: 2,600 qoysas ku nool 5 degmo oo la gaarsiiyay deeq raashin ah
Barnaamijka Afuri walaal oo ay iska kaashadeen Ganacsatada Gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah shirkadaha ka jira dalka oo ay ugu horeyso Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta waxaa ka faa’ideysatay 2,600 oo ah qoysas danyar ah oo ku nool ilaa shan degmo oo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Gargaarka ayaa isugu jiray bur bariis, sokor, saliid, iyo timir lagudoonsiiyay qoysaska danta yar ah oo kukala nool degmooyinka hodon, howl wadaag, wardhiigley waabari iyo degmada xamar jajab ee gobolka banaadir waxaana dadka kafaa’ideystay ay ahaayeen qooysas danyar ah oo aad ugu baahi qabay maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Madaxa hay’ada Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka hadlayay xarunta degmada Hodon oo ka mid ahayd goobahii deeqda lagu qeybinayay ayaa sheegay in deeqdan ay qeyb katahay barnaamijka afuri walaal oo ay iska kaashanayaa gudi kakooban ganacsatada gobolka banaadir iyo qaar kamid ah shirkadaha kajira dalka.
Cabdiraxman Cabdullaahi Galaambi oo ah Gudoomiye kuxigeenka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaliyeed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijka afuri walaal loogu talagalay in ay kafaa”ideestaan 10,000 oo qoysas danyar ah kuwaasi oo ku kala nool 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Degmada Hodon ee gobolka Banaadir C/xakiin Dhagajuun oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdii gudiga afuri walaal ay soo gaarsiiyeen degmada hodon ay kafaa’ideysteen dad dan yar ah oo kunool degmadiisa kuwaasi oo si aad ugu baahi qabay.
Barnaamijka afuri walaal waxaa horay ugasoo faa’ideystay ilaa sideed degmo oo ka tirsan Gobolka Banaadir, kuwaasi oo isku geyntooda ka dhigaysa marka lagu daro 5-ta degmo ee maanta kafaa”ideesatay ilaa 13 degmo oo katirsan gobolka banaadi iyadoo laguwado in degmooyinka harsan iyana sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyo gargaarka.
Hay’ada Hormuud Foundation iyo Salaam Bank ayaa door weyn ka ciyaaraysa barnaamijka afuri walaal oo ay iska kaashanayaan ganacsatada Soomaliyeed.